Madaxweynaha Somalia oo ka digay musuqa iyo ku takri falidda shaqaalaha |
Madaxweynaha Somalia oo ka digay musuqa iyo ku takri falidda shaqaalaha
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladdu ay mudnaanta siin doonto la dagaalanka Musuqa iyo isla xisaabtanka. si looga hortago lunsiga dhaqaalaha iyo ku takri falka shaqaalaha dowladda.
Madaxwnaha ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumadda la soo dhisi doono dhawaan ay howsheeda ka billaabi doonto ka hortagga musuqa iyo ku tagri falka hantida qaranka.
“Sanadkan waa sanadkii la dagaalka musuqa, wax dulqaad ah oo musuq maasuq loo yeelanaayana ma jirto, nin walboo musuq maasuqa ku nooloow inta lagaa soo gaaraayaad nooshahay waa la xisaabtamayaa” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale madaxweynaha ayaa ka digay ku tagri falidda shaqaalaha dowladda, isagoo tilmaamay in awood dastuuriya ay tahay habka shaqo qorista shaqaalaha ayna ku yimaadaan tartan furan.
“Shaqaalaha in lagu tagri falo oo xeyna maalin la raacdeeyo ma ogolaan doono, wasiirrada cusubna waa u sheegeeynaa waana ku cel celineynaa, suurtagalna ma aha in wasiirka marku yimaado uu shaqaalihii hore ee meesha joogay inta dareeriyo uu qoro kuwo jufadiisa ah” ayuu yiri madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa intaa ku daray in sanadkan loo tartami doono shaqada dowladda, isagoo bulshada u sheegay iney dhamaatay waxa loo yaqaano meeleyn, taa bedelkeedana shaqada lagu helayo tartan furan.